25 အောင်မြင်မှုခြေလှမ်းများ: ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုနှင့်စီးပွားရေး Blogging | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 17, 2009 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
အဘို့ပြင်ဆင်မှုအတွက် Indiana BlogBryan Povlinski ၏အကူအညီဖြင့်စာမျက်နှာ ၇၅ မျက်နှာပါသော eBook တစ်ခုကိုအကြံဥာဏ်များ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ လှည့်ကွက်များနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်တန် ပေး၍ ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုနှင့်စီးပွားရေး Blogging.
ကျနော်တို့ Blog Indiana မှာကော်ပီ ၁၀၀ ကျော်ဝေငှခဲ့တယ်။ ငါထောက်ခံမှုအားလုံးတန်ဖိုးထား!
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး eBook ဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင် eBooks များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည့်အခြားဘလော့ဂါများထံမှအကြံဥာဏ်အချို့ရရှိသည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကွံဉာဏျပေးခဲ့သည့်အကွံဉာဏ်မှာအကန့်အသတ်ဖြင့် (ဒေါ်လာ ၉၉) မွကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည် eBook ကိုစျေးသက်သာစွာဖြင့်ဖြန့်ချီသည် နှင့် ကစာအုပ်ပတ်ပတ်လည်အချို့သော buzz ထုတ်ပေးပါတယ်။
မာတိကာကို Download လုပ်ပါ သင်ဤစာအုပ်သည်မည်မျှပြည့်စုံသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းကို ၉.၉၉ ဒေါ်လာခန့်ထားရှိမည် - မိတ္တူကူးယူရန်လုံလောက်သောအချိန်မတိုင်မီအထိကျွန်ုပ်သည်ဘတ်ဇ်အချို့ကိုစတင်တွေ့သည်။ buzzin ကိုစတင်ပါ။
သြဂုတ် 18, 2009 မှာ 9: 09 AM
သင့်အတွက် ကံကောင်းခြင်း Douglas အီးဘွတ်အသစ်၊
သြဂုတ်လ 19 ရက် 2009 ခုနှစ် 5:14 နာရီ
Blog Indiana နှင့် WOW တွင် ဤ ebook မိတ္တူကို ရနိုင်လောက်အောင် ကံကောင်းခဲ့သည်။ $9.99 ထက် ပိုတန်သည် ။ ၎င်းသည် SEO နှင့်ပတ်သက်သောကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများအပြည့်ရှိသည်။ စာအုပ်အတွက် လမ်းတစ်ဝက်တောင် မပြီးသေးပါဘူး၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ပြီး စားပွဲကိုးကားအဖြစ် သိမ်းထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ။ မင်းစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ Doug နဲ့ Bryan က အရမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။
သြဂုတ်လ 24 ရက် 2009 ခုနှစ် 5:01 နာရီ
ကောင်းတယ် Doug! အရမ်းရောင်းကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။